Trapiche amethyst waa nooc dhif ah oo kala duwan oo ah quartz purple ah - soonaha midabka - Fiidiyow
Trapiche-amethyst-ka u eg
Iibso dukaankayaga dabiiciga ah khiyaanada dabiiciga ah
Trapiche amethyst (ama dabeysha u eg amethyst) waa noocyo dhif iyo naadir ah oo leh Qudaar midab gaar ah leh. Way fududahay in la garto
Qurux u eg 'Trapiche' like
Qurux dhab ah oo khiyaano leh ayaa ku dhex jira qaybaha koritaanka. Si kastaba ha noqotee, jiidashada midabaynta fudud ama koritaanka ka-qaadista ee dhextaalla khariidadda ayaa ku abuuri kara qaabab "dabac-u-eg" qaababka quruxda qaarkood. Tan macnaheedu waxaa weeye in dhagaxa dhaldhalaalka u eg sidan oo kale ah uu yahay mid joogto ah, halka walxaha dhabta ah ee dabiiciga ah ay macdanta u kala qaybsamaan qaybaha oo si shaqsiyan u kora.
Si kastaba ha noqotee, dahabkaasi waxay leeyihiin summad aad u qurux badan oo la xidhiidha qururucyo baayacmushtari waxayna sidoo kale aad u yar yihiin. Macdan isku mid ah oo sameeya khiyaano run ah ayaa abuuri kara midab u eg sida dilaacinta midabka ama, marka la eego barootiinka wareega, qaababka xiisaha leh. Intaa waxaa sii dheer, dheeman iyo pezzottaite waxay ku koraan karaa qururucyo u eg-dabacsan.
Macdanta leh caadooyin aan badnayn oo mucjiso ah ayaa sidoo kale sameysan kara waxyaabo qaali ah oo la mid ah. Tusaale ahaan, tichechrosite snaich-sida oo kale waxay ku dhacdaa Argentina.
Amethyst-ka dabiiciga ahi waa midab buluug ah oo kala duwan oo ah kiltall crystalline. Waxay leedahay midabkeedu midabkeedu yahay 'violet' sababta oo ah sunta dabiiciga ah ee birta wasakhda awgeed. Xaaladaha qaarkood iyada oo lala kaashanayo waxyaabaha kumeelgaarka ah ee ku meelgaarka ah Jiritaanka walxaha raadku waxay keenaan beddelaado isku-dheellitiran oo isku-dheellitiran oo isku-dhafan. Sidoo kale, adkaanta macdanta ayaa la mid ah sida kilz. Sidaa daraadeed waxay ku habboon tahay in lagu isticmaalo dahabka qiime jaban.
Ammystuhu gemstone wuxuu ku dhacaa ubaxyada ugu horreeya. Laga soo bilaabo violet midab khafiif ah oo guduud ah illaa guduud. Waxay soo bandhigi kartaa mid ama labadaba aragti sare: casaan iyo buluug. Siberiya, sidoo kale Sri Lanka, Brazil iyo Aasiya ayaa ah isha miinada ee noocyada ugu fiican. Siberian-weyne waa magaca fasalka ugu habboon. Waxay leedahay muuqaal buluug ah oo u eg 75 / 80%, oo leh buluug 15 / 20%. Waxay kuxirantahay isha iftiinka.
Trapiche amethyst macnaha
Trapiche Amethyst ayaa la sheegay inuu xoojinayo nidaamka endocrine iyo habka difaaca. Sababo la xiriira samaynta nalalka qaaska ah, ayaa la sheegay inay sare u qaaddo waxqabadka maskaxda, kordhiso feejignaanta, iyo tamar gelinta qofka xirtay. Quruxleydan ayaa sidoo kale la sheegay inay sare u qaadeyso awooda maskaxda, waxay aad ugu fiican tahay tamarta kaydinta inta lagu gudajiro. Wax alla wixii aad rumeysan tahay, waad ku raaxeysan kartaa Trapiche Amethyst-kaaga.